yekutanga OS 5.1.5 inosvika pamwe nekuvandudzwa muAppCenter uye maFiles | Linux Vakapindwa muropa
yekutanga OS 5.1.5 inosvika pamwe nekuvandudzwa muAppCenter, maFaera uye gadziriso zvakajairika
pablinux | | Kugoverwa, Noticias
Ini ndinorangarira nguva apo Daniel Foré nechikwata chake vakatora nguva yakareba kuburitsa vhezheni nyowani yesisitimu yekushandisa iyo yavanogadzira kana kugadzirisa ekugadzirisa. Idzo nguva dziri kumashure kwedu, zvirinani kana zvasvika kune yekugadzirisa kugadzirisa. Kwangopera mwedzi mumwe chete mushure previous version, timu yevagadziri veiyi yakanaka uye inoshanda sisitimu yekushandisa yakave nemufaro kuzivisa iyo launch de yekutanga OS 5.1.5, sisitimu inoenda nekodename Hera.
Iyi vhezheni haisanganisi shanduko dzakakurumbira, asi Cassidy James Blaede akataura senyaya dzinozivikanwa kugadzirisa kwakaitwa kuAppCenter, yako software centre, uye mune yako faira maneja. Pazasi iwe watsanangura zvishoma zvimwe izvi uye nedzimwe shanduko dzakauya pamwe neyekutanga OS 5.1.5 Hera.
1 Pfungwa dzepakutanga OS 5.1.5
Pfungwa dzepakutanga OS 5.1.5
Kunatsiridzwa kwakaitwa, senge izvo izvozvi zvaunogona gadza zvigadziriso pasina mvumo yemutungamiri. Sezvo ivo vachitsanangura, ivo vanotenda kuti zvakakosha kuti idzi mvumo dzichiri kudikanwa pakuisa nyowani software, asi hazviite zvine musoro kana zvichizovandudzwa. Izvi zvakare zvichave zviri zviitiko zvePlppak.
Zvakare, makuru escreen ekushandisa anoratidzwa zvakachengeteka zvakanyanya nekutora zvapfuura zvabuda uye kuzvidzorera kwavari pazvinenge zvichidikanwa. Ivo zvakare yakavandudza kuvimbika kwenzvimbo yedoko bhaluni, izvo zvinoita kuti zviratidze zvirinani kuwanda kweyekuvandudza aripo.
Zvino kusvika teedzera mufananidzo uye unamate mune chimwe chishandiso, iwo mufananidzo unonamirwa panzvimbo pemigwagwa, chero bedzi zvichibvira nekuti iko kunyorera kunowirirana. Saizvozvowo, chimwe kana zvimwe zvakatemwa kana kuteedzerwa zvinyorwa zvino zvaigona kunamidzirwa kune imwe dhairekitori ine nzira pfupi yekhibhodi ctrl + v nefodhi yakasarudzwa. Mimwe tupukanana tudiki takawanda takagadziriswawo.
Pakati peimwe shanduko dzakaunzwa mune yekutanga OS 5.1.5 Hera, isu tinayo
Mune maratidziro eNetwork, rutsigiro rwemarudzi akasiyana siyana enetwork encryption yakagadziridzwa uye runyorwa rwekunyorera runotaurwa chaizvo.
Yakagadziriswa inogona kutonhodza kana ichichinja akawanda mapaneru maseru, kusanganisira Simba, Zuva & Nguva, uye Desktop marongero.
Kuita kwave kunatsiridzwa zvakanyanya kana uchichinja mwedzi mune iyo nguva yekuratidzira kana iine zviitiko, mukuwedzera, ivo vakagadzirisa asipo zviitiko zvezviitiko mune mamwe mamiriro. MuKarenda app pachayo, nyaya dzinoverengeka nekuwedzera uye kudzima zviitiko zvinodzokororwa pamwedzi zvakagadziriswa.
MaSystem icons akagadziridzwa kuti ashandise nyowani anoenderana Bubblegum uye Mint palette mavara.
Inokurumidza software kugadzirisa uye kuwiriranisa sync, uye hutsva hukuru hwewindows vhara mifananidzo yekufananidzira uye zvaunofarira zvashandiswa
Vashandisi varipo vachakwanisa kusimudzira kune iyi vhezheni kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa. Zvekuisa nyowani, iyo yekutanga OS 5.1.5 Hera ISO inogona kutorwa kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 5.1.5 inosvika pamwe nekuvandudzwa muAppCenter, maFaera uye gadziriso zvakajairika
Blender 2.83, yekutanga LTS vhezheni yesoftware inouya nenhau dzakatanhamara
Lenovo achatengesa mamwe malaptop nemaPC neUbuntu neRed Hat